musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Ita Mari Kuona Vhidhiyo NeApp iyi
FunnyGo APP ipuratifomu yekuona mavhidhiyo. Pane iyi APP, vashandisi vanogona kuona makumi ezviuru emavhidhiyo ane mukurumbira mahara uye kuita mari.
HiSceneTeam yakatanga FunnyGo App yevashandisi muIndonesia muna Chikumi gore rino. Kusvika parizvino, kwave nevanhu miriyoni imwe vakadhawunirodha App iyi uye vakaita mari nekuona mavhidhiyo pairi.
Zvinotonyanya kukosha, paunenge uchiona mavhidhiyo, vashandisi vanogona kuita mari nyore paAPP. Sekureva kwemaneja wechigadzirwa cheHisceneteam, vashandisi vanowana mari yegoridhe chero vakadhawunirodha APP, vobva vakwanisa kuvadzikinura kuita mari. Vashandisi vanogonawo kuwana mamwe mari dzegoridhe nekuona mavhidhiyo paApp kana kukoka shamwari kuti dzitore Funnygo. PaFunnygo, vamwe vanhu vakawana Rp zana.
Mukuwedzera, kune zviitiko zvakawanda paFunnyGo APP. Vashandisi vanogona kutora chikamu muzviitiko uye vobva vawana mibairo yakawanda. Semuenzaniso, vashandisi vangave nemukana wekuhwina iPhone13 kana vakapinda mu "lottery".
Maneja wechigadzirwa cheHiSceneTeam akazivisa, kuitira kupa vashandisi ruzivo rwuri nani, FunnyGo yakasimudzira chigadzirwa. Wese munhu anogona kubvisa mari yekutanga pazuva rimwe chete sekureba kwavo kurodha APP, uye mari yacho inozopihwa ipapo ipapo. Vashandisi vanogona kubvisa mari kuburikidza nematanho akawanda akadai seDana neOVO.
Kuti tigamuchire Gore Idzva, FunnyGo achavhura zvimwe zviitiko muna Zvita, apo mibayiro yese ichapetwa kaviri.